အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်တားမြစ်ထားသောအစာသည် Orbitofrontal အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု (၂၀၁၁) နှင့်ဆက်စပ်သည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် Disinhibited စား orbitofrontal အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2011) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
L ကို Maayan,2,4 * ကို C Hoogendoorn,1* V ကိုချွေး,1 နှင့်အေ Convit1,3,4
အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦးရာသီ) ။ 2011 ဇူလိုင်လ; 19 (7): 1382-1387 ။
1 စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ဆေးပညာ၏နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, 550 ပထမဦးစွာရိပ်သာလမ်း, နယူးယောက်, NY 10016, USA ။
2 ကလေးသူငယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဆေးပညာ၏နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, 550 ပထမဦးစွာရိပ်သာလမ်း, နယူးယောက်, NY 10016, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။
3 ဆေးပညာဦးစီးဌာန, ဆေးပညာ၏နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, 550 ပထမဦးစွာရိပ်သာလမ်း, နယူးယောက်, NY 10016, USA ။
4 စိတ်ရောဂါသုတေသနနာသန် Kline Institute မှ, 140 ဟောငျး Orangeburg လမ်း။ Orangeburg နယူးယော့ 10962, အမေရိကန်နိုင်ငံ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အဝလွန်ခြင်း cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွား, disinhibited စားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်သိမြင်မှုအကဲဖြတ်အပေါ်အနိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်။ အများကြီးလျော့နည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဤဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. လူသိများနှင့်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများ၏တူညီသောအုပ်စု, အမူအကျင့်သိမြင်မှုနှင့် neurostructural အစီအမံအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိလေ့လာမှုများရှိပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကအတော်လေးကျန်းမာလူငယ်အတွက်အဝလွန်ခြင်း, အလုပ်အမှုဆောင် function ကို, disinhibition နှင့်ဦးနှောက် volumes ကိုကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို 54 အဝလွန်နှင့် 37 ပိန်မြီးကောင်ပေါက်ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးသိမြင်ဘက်ထရီစားအပြုအမူများစစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများနှင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Neuropsychological အကဲဖြတ်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး function ကိုပစ်မှတ်ထားတာဝန်များကိုပါဝင်သည်။ အစာစားခြင်းအပြုအမူတွေကိုသုံး Factor စားမေးခွန်းလွှာ (TFEQ) ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRIs ကဦးနှောက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တစ် 1.5 T က Siemens Avanto MRI စနစ် (Siemens, Erlangen, ဂျာမနီ) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ပိန်နှင့်အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်, အသက်အပေါ်ပညာရေး, ကျား, မ, နှင့်လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အမှီမှဆွေမျိုး, အဝလွန်သင်တန်းသားများသည် TFEQ အပေါ်သိမြင်စမ်းသပ်မှုအပေါ်အနိမ့်စွမ်းဆောင်ရည် disinhibition ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား ratings ခဲ့ခြင်းနှင့်နိမ့် orbitofrontal cortex အသံအတိုးအကျယ်။ Disinhibition သိသိသာသာ body mass index, Stroop အရောင်-နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရမှတ်များနှင့် orbitofrontal cortex အသံအတိုးအကျယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ neurostructural လိုငွေပြမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုနားလည်၏အရေးပါမှုကိုမှဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အချက်တွင်ဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာကိုဖြစ်ပါတယ်။
keywords: အဝလွန်ခြင်း, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, Disinhibition, MRI, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, သိမှတ်ခံစားမှု, Orbitofrontal Cortex
US မှာကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အဝလွန်ခြင်း၏ပျံ့နှံ့ 1970 ကတည်းကသုံးဆထက်ပိုရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဝလွန်ချွတ်ညှိပြီးကြစေခြင်းငှါအကြံပြုသော်လည်း, ပစ္စုပ္ပန်မြင့်မားတဲ့နှုန်းထား (နှလုံးသွေးကြောနှင့် endocrine နာမကျန်းပါဝင်သောတစ်ခုခါနီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း1).
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုန့်ပြန်အခွင့်အရေးသမားများအစာစားရန် propensity အဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအပြုအမူအစာစားခြင်းအတွက် Disinhibition, ရှည်လျားသောနှစ်ဦးစလုံးလူငယ်များနှင့်လူကြီးများ (များတွင်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်2) ။ နောက်ဆုံးအဝလွန်ခြင်းမှဦးဆောင်ကြောင်းအတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအတွက်ဆက်စပ်ထိန်းချုပ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း (hypothalamus အပါအဝင်ဦးနှောက်ထဲမှာအများအပြားအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ3) နှင့်ပိုမကြာသေးမီအလုပ်နှင့်အညီ, (ဦးနှောက် cortex အတွက်4) ။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်အောင်ကျွေးနှစ်ဦးစလုံးပြည်နယ်များအတွက်ပိန်ကြုံခြင်းနှင့်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုတစ်ဦးကစီးရီးအတွက် anterior cingulate, medial prefrontal (အပါအဝင်အများအပြား cortical ဒေသများပြပါပြီ5), insula, posterior cingulate, ယာယီနှင့် orbitofrontal cortical (6) differential အတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှု၏စည်းမျဉ်းမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း, မွတ်မပြေခြင်းနှင့် BMI ၏အဆင့်ပေါ် မူတည်. activated ခံရဖို့။ အပြုအမူ၏တားစီးအတွက်သော့ချက်ဧရိယာအဖြစ် OFC ၏နားလည်မှု, ကျော Phineas Gage ၏ဖြစ်ရပ်ဖို့ကံဆိုးကြက် 19th ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးမြှင့် Impulse အတွက်ရလဒ်ဖြစ်သောဖွယ်ရှိသည်သူ၏ orbitofrontal cortex မထိခိုက်စေမတော်တဆမှု, အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူရာစုရထားလမ်းအလုပ်သမား (7).
Neurostructural တွေ့ရှိချက်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ် Mass Index (BMI) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းပါပြီ။ voxel-based morphometry (VBM) အလုပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေ 55 အသက်နှင့်အထက်၏သေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုမှာ, BMI အပျက်သဘောအပြင်, လက်ဝဲ orbitofrontal အပါအဝင်အများအပြားတိုကျရိုကျဒေသများရှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုအတူညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျနှင့်ညာဘက် precentral gyri ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် လက်ျာ cerebellum အဖြစ် parahippocampal, fusiform နှင့် lingual gyri (လွှမ်းခြုံကြီးမားတဲ့ညာဘက် posterior ဒေသအပါအဝင်အခြားဒေသများသို့8) ။ 1,428 အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှု BMI နှင့်ယေဘုယျမီးခိုးရောင်ကိစ္စအကြားယောက်ျားတို့တွင်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောနှစ်နိုင်ငံ medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, precuneus, အ cerebellum ၏ midbrain နှင့် anterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများ9) ။ နောက်ထပ် VBM လေ့လာမှုအဝလွန်လူကြီးများထိုကဲ့သို့သောတိုကျရိုကျ operculum, အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ gyrus, Post-အလယ်ပိုင်း gyrus အဖြစ် putamen (အဖြစ်ဒေသများရှိအနိမ့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆရှိသည်ပြသ10) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုသည် (type ကို2များတွင်ဆီးချိုရောဂါ (T2DM) နဲ့အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြား neurostructural မူမမှန်ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်26), ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမရှိထိုကဲ့သို့သောလိုငွေပြမှု T2DM မပါဘဲအဝလွန်လူငယ်များအကြားဖော်ပြထားပါပြီ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအပြင်, သိမြင်မှုအကဲဖြတ်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်တုန့်ပြန်တားစီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စိတ်မချရသောစေခြင်းငှါသရုပ်ပြပါပြီ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) နှင့်သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုအလုပ်သမားတစ်ဦးကလေ့လာမှုအဝလွန်လူကြီးများအခြေခံ prefrontal ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အဖြစ် Stroop တာဝန်အပေါ်လျော့နည်းသွားစွမ်းဆောင်ရည်, ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုတစ်ဦးစမ်းသပ် (လျော့နည်းသွားရှိသည်ဟုတွေ့ရှိ11) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်တုန့်ပြန်တားစီး၏အခြားလေ့လာမှုများ (BMI နှင့်အတူသူတို့အား variable တွေကိုတစ်အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ပြခဲ့ကြ12-14) ။ ထို့ပြင်အလွန်အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက် (စံတန်ဖိုးအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်အမှုဆောင်တာဝန်များကိုအပေါ် functioning လျော့နည်းသွားပြသ15).
ကျနော်တို့သုံး Factor စားမေးခွန်းလွှာ (TFEQ) ကို အသုံးပြု. ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ, အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်စားအပြုအမူတွေအတွက် Self-အစီရင်ခံ disinhibition မြင့်မား ratings ရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏အကဲဖြတ်အပေါ်အနိမ့်ရမှတ်များမယ်လို့တွေးဆခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (MRI-based မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုအဖြစ်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက် volumes ကို) ၏ neurostructural အစီအမံအတွက်သမာဓိရှိလျှော့ချ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ TFEQ အပေါ် disinhibition အဆိုးသက်ဆိုင်ရာဒိုမိန်းများပေါ်တွင်သိမြင်ရမှတ်များနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဧရိယာ MRI-based တိုင်းတာနှင့်ဆက်စပ်မည် posited ။
ကိုးဆယ့်တစ် ဦး လူငယ် (၁၄-၂၁ နှစ်)၊ ၃၇ ပိန် (BMI <14 kg / m)2 သို့မဟုတ်ခါးမှအမြင့်အချိုး <0.5) နှင့် 54 အ ၀ လွန် (BMI≥30 kg / m)2 သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်ကျားမအတွက် BMI အတွက်> ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအထဲမှရှစ်ဆယ့်တစ် (၃၆ ပိန်၊ ၄၅ အဝလွန်) သည် MRI ရရှိခဲ့သည်။ အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆယ်ယောက်သည် MRI မရရှိခဲ့ခြင်းမှာ ၂ ဦး သည်၎င်းတို့၏ခန့်အပ်မှုများကိုမခံခဲ့ရ၊ တစ် ဦး မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီးလုံခြုံမှုဘက်မှမှားယွင်းစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ ကီလိုဂရမ် / မီတာ2 နှင့်စကင်နာများကနေရာချပေးနိုင်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားထက်ကျော်လွန်။
ပိန်သင်တန်းသားများကို 17.3 နှစ်ပေါင်း± 1.6 ± 17.5 နှစ်နှင့်အဝလွန် 1.6 နှစ်ပေါင်းတစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်စုနှစ်စုလည်းပညာရေး, ကျား, မ, နှင့်လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအပေါ်လိုက်ဖက်နှင့်သိမြင်မှုပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းအပေါငျးတို့သခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ, သို့မဟုတ် (စိတ်ကျရောဂါနှင့်အရက်သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်) စိတ်ရောဂါနာမကျန်းဖယ်ထုတ်လိုက်တစ်ဦးချင်းစီ (dyslipidemia, T2DM, polycystic Ovary ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်သွေးတိုးရောဂါ၏တိုတောင်းသောအင်ဆူလင်ကိုခုခံထက်အခြား) ဆေးပညာအာရုံကြောများ၏အထောက်အထား။ T2DM လည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်လိုက်။ သင်တန်းသားများကိုနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများတိကျမ်းစာ၌လာသည်အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏နှင့်၎င်းတို့၏အချိန်နှင့်အဆင်မပြေများအတွက်လျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု protocol ကိုဆေးပညာ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အဆင့်ဆင့်; အားလုံးသည်လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဂလူးကို့စ, အင်ဆူလင်, lipid ၏အကဲဖြတ်ဘို့နေ့ချင်းညချင်းအစာရှောင်ခြင်းတစ်ဦး 10 နာရီအကြာတွင်ခေါ်ဆောင်သွားသွေးနမူနာရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ရောင်ရမ်းအမှတ်အသား (hs-CRP မြင့်မားသော sensitivity ကို C-reactive protein) ။ ဂလူးကို့စ chemiluminescence (Advia Centaur, Bayer ကော်ပိုရေးရှင်း) ကအင်ဆူလင်တစ်ဂလူးကို့စ oxidase နည်းလမ်း (စသည်တို့ 950 ကို AT, Amersham, အင်္ဂလန်) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့ပါတယ်နှင့် CRP တစ်ခု enzymatic immunoassay (စသည်တို့ CRP ဆလိုက်, Ortho လက်တွေ့ရှာဖွေရေး) ကို အသုံးပြု. သွေးရည်ကြည်အတွက်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အင်ဆူလင် Sensitivity ကိုအင်ဆူလင် Resistance ၏ Homeostasis မော်ဒယ်အကဲဖြတ် (HOMA-မှာ IR) ကိုအသုံးပြုခြင်းခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဉာဏ်ရည်ဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၊ မကြာသေးမီကမှတ်ဉာဏ်၊ အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအပါအ ၀ င်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကဲဖြတ်လေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝလွန်သောအဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်များအကြားတို့တွင်ရှိသောပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ကွဲပြားမှုရှိလိမ့်မည်ဟုတွေးဆခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆန်းစစ်လေ့လာချက်များအား Frontal lobobe သမာဓိရှိခြင်းနှင့်နဂိုအတိုင်းအလုပ်လုပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထင်ဟပ်စေသော Controlled Oral Word Association Test (COWAT)၊ Trail Making Test အစိတ်အပိုင်း A & B, Stroop Task, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ကျယ်ပြန့်အကဲဖြတ် (WRAML) ၏အာရုံစူးစိုက်မှု / အာရုံစူးစိုက်မှုအညွှန်းကိန်းနှင့် WRAML ၏အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အညွှန်းကိန်း။ အသက် - တည့်မတ်စံသတ်မှတ်ချက်ရမှတ်များပေးသော WRAML နှင့် Stroop မှအပကျန်သည့်ရမှတ်များကိုအစီရင်ခံသည်။ အုပ်ချုပ်စစ်ဆေးမှုအားလုံးသည်အခြားနေရာများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောစံ neuropsychological တူရိယာများဖြစ်သည် (16).
သုံး Factor စားမေးခွန်းလွှာ (TFEQ)
အပြုအမူအစာစားခြင်း၏လက္ခဏာများအတွက် TFEQ အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ (; 51 ပစ္စည်းများအပြုအမူအစာစားခြင်း၏ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး), disinhibition (ဆိုလိုသည်မှာ, စိတ်ခံစားမှုအချက်များနှင့်အာရုံခံတွေကိုတုန့်ပြန်အစာစားခြင်း၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်; 21 ပစ္စည်းများကို) အ TFEQ သုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတိုင်းတာခြင်း subscales ၏ရေးစပ်တဲ့ 16-ကို item တူရိယာ, ဖြစ်ပြီး, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၏ခံစားချက်များကိုတုံ့ပြန်စားသုံးခြင်း၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်; 14 ပစ္စည်းများ) ။ ဘာသာရပ်များနေ့လယ်စာခဲ့ပြီးနောက် TFEQ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နာရီအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
MRI သိမ်းယူမှုနှင့် Image ကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
အားလုံးဘာသာရပ်များတစ် 1.5 ပေါင်တစ်ဦးချင်းစီမှတက်ဘို့သင့်လျော်တဲ့ 65 လက်မအချင်းထွင်းဖေါက်ခြင်းနှင့်စားပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်သောတူညီ 400 T က Siemens Avanto MRI စနစ်အပေါ်ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ TR 1 ms;; TE 1300 ms; TI 4.38 ms; FOV 800 × 250; အချပ်အထူ 250 မီလီမီတာ; NEX 1.2; Flip ထောင့် 1 °; matrix ကိုအရွယ်အစား 15 ×ကျနော်တို့ T256 မာန်တင်းသံလိုက်-ပြင်ဆင်ထားလျင်မြန်စွာဝယ်ယူ gradient ကိုပဲ့တင်သံပုံရိပ်တွေ (MPRAGE ဝယ်ယူ 256; 192 Coronal ချပ်) ။
WM / GM ကထုထည်ကြီးမားသောအားသုံးသပ်ခြင်း
ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း MPRAGE ပုံရိပ်တွေ၏ Spatial ပုံမှန်နှင့် segment (အလိုအလျောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသုံးပြုသွားမည်17) ကိုစာရင်းအင်း parametric မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲကို (SPM5) ။ MPRAGE ပုံရိပ်တွေပထမဦးဆုံးအချက်ပြမှု Non-ယူနီဖောင်းအဘို့အတညျ့နှင့်စံ T1 Montreal အာရုံကြော Institute က template ကိုမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ SPM5 အတွက်တစ်ရှူးခွဲခြား algorithm ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ကိုသူတို့မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) သို့ပုံမှန် MPRAGE ပုံရိပ်တွေ segmented, အဖြူရောင်ကိစ္စ (WM), နှင့်အဖြစ်ခွဲခြားခံတစ်ဦးချင်းစီ voxel များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုယ်စားပြုမြေပုံနေသော cerebro-ကျောရိုးအရည် (CSF) partitions ကို, GM က, WM သို့မဟုတ် CSF ။ ဤရွေ့ကား segmented partitions ကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစံတင်းပလိတ်များမှနောက်ပိုင်းတွင်ပုံမှန်ရှိကြ၏။ မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်အကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး myelination နေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင်းပေးထားသည့်အပြင်, ကျနော်တို့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏ဒေသများတွင်ရယူထားခြင်းမှနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့တင်းပလိတ်များအသုံးပြုသွားမည်။ ဤ SPM အလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒ LABEL (AAL) (ခဲ့ကြသည်18) template ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကှကျနည်းလမ်း (19) ။ အဆိုပါ AAL template ကိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, တစ်ဦး anterior cingulate ဒေသနှင့်တစ်ဦး orbitofrontal ဒေသရယူထားခြင်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကှကျနည်းလမ်းတစ် prefrontal ဒေသ (တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအနုတ်အဆိုပါဖြည့်စွက်မော်တာဒေသ) ရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးချင်းစီ segment partition ကိုရန်ဒေသများပုံဖော်ထို့နောက်အုပ်စုနှစ်စု၏အသီးအသီးအဘို့အဘာသာရပ်များဖြတ်ပြီးတန်ဖိုးများကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်အမှုအဆင့်မှာတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်နှင့်တိုကျရိုကျဒေသများတွင် WM, GM က, CSF volumes ကို၏အချိုးအစား quantified ။
လူ ဦး ရေအချိုးအစား၊ endocrine အချက်အလက်များ၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဦး နှောက်ပမာဏအကြားအုပ်စုကွဲလွဲမှုများကိုဆန်းစစ်ထားသော Tiles နှစ်မျိုးရှိသောသီးခြားလွတ်လပ်သောနမူနာများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ TFEQ ပိုးသတ်ဆေးရမှတ်နှင့် BMI၊ Stroop အရောင်စကားလုံးရမှတ်နှင့် orbitofrontal cortex မီးခိုးရောင်အကြားအကြား Pearson ဆက်စပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြောင်း variable ကိုများအတွက်အုပ်စု၏ယုတ်ကနေနောက်ထပ်2စံသွေဖီထက်ပိုသောဒေတာများကိုဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဦး ခေါင်း၏အရွယ်အစားနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပမာဏများတွင်တစ် ဦး ချင်းအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီ၏အတွင်းပိုင်းကျဉ်းကျဉ်း (ICV) အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာပြီးဒေသတွင်း ဦး နှောက်ပမာဏကိုချိန်ညှိရန် ICV တန်ဖိုးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီးစာဖတ်သူကိုလေ့လာခဲ့သော ဦး နှောက်ဒေသများ၏အရွယ်အစားကိုသိစေရန်ဒေသဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပမာဏကိုဖော်ပြသည့်ဇယားသည်အကြမ်းအားဖြင့် (ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းမရှိသော) ပမာဏကိုပြသည်။ သို့သော်တင်ပြထားသောပုံရိပ်အားလုံးအတွက်စာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်အရေးပါမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားတို့ညှိနှိုင်းထားသည့် ဦး နှောက် volumes များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒေသစစ်တမ်းများနှင့် endocrine ဒေတာများ
ဘာသာရပ်အုပ်စုများအသက်အရွယ်, ကျားမ, ကျောင်းတန်းနှင့် Hollingshead လူမှုစီးပွား-status ကို (SES) အတွက်လိုက်ဖက်ခဲ့ကြသည်။ အဝလွန်သင်တန်းသားများနှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုပုံ BMI အတွက်မြင့်မားနှင့်လည်းပိုမိုမြင့်မားနှလုံးကျုံ့နှင့် diastolic သွေးပေါင်ချိန်, အစာရှောင်တတ်သောအင်ဆူလင်နှင့်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့် (သို့သော်ယင်း normoglycemic အကွာအဝေးအတွင်းအားလုံး) အဖြစ်အင်ဆူလင်ကိုခုခံ၏ homeostatic မော်ဒယ်အကဲဖြတ် (HOMA-မှာ IR ခဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ခဲ့ကြသည် ), triglyceride, အနိမ့်သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း (LDL) လက်စထရောနှင့်မြင့်မားသော sensitivity ကို C-reactive protein (CRP) ။ အဝလွန်ဘာသာရပ်များလည်းမြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း (HDL) ၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု. ရည်ညွှန်းပါ စားပွဲတင် 1.
ဒေသစစ်တမ်းများနှင့်ပိန်ကြုံခြင်းနှင့်အဝလွန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အဖွဲ့များ၏ endocrine လက်ခဏာ
သုံး Factor စားမေးခွန်းလွှာ
အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်များသည်မေးခွန်း (၃) ခုပါသောစားသုံးသူမေးခွန်းလွှာ (6.85 ± 3.55 vs. 3.91 ± 1.96, p <0.000, cohen's (()) = 1.07) နှင့်အစာခေါင်းပါးခြင်း (6.60 ±) ၏ပိုးမွှားသည့်အချက်များအပေါ်အမှီသဟဲပါဝင်သူများထက်သိသိသာသာမြင့်မားခဲ့သည်။ 3.37 vs. 4.68 ± 2.84, p = 0.008, = = 0.81) နှင့်သိမြင်မှုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအချက် (9.19 ± 4.30 vs. 6.78 ± 4.11, p = 0.012, = = 0.57) ။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MRI ပါ ၀ င်သူ ၈၁ ဦး ၏အုပ်စုအလိုက်အတွက်ဤဆန်းစစ်ခြင်းများကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရလဒ်များကိုမပြောင်းလဲပဲ (ဒေတာများကိုမပြပါ) ။
မြီးကောင်ပေါက်အမှီမှဆွေမျိုး, အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်ကျနော်တို့ခန့်မှန်းအိုင်ကျူအဘို့အထိန်းချုပ်ထားလျှင်ပင်အများစုက Stroop (တားစီးတဲ့တိုင်းတာမှု) အတွက်အသံထွက်တိုင်းတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတာဝန်, နှင့် WRAML ၏အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်ညွှန်းကိန်းများတွင်ပိုမိုဆိုးရွားသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု. ရည်ညွှန်းပါ စားပွဲတင် 2.
10 ဘာသာရပ်များအဖြစ် MRI အကဲဖြတ် (အသေးစိတျအထကျပါဝင်သူနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကဏ္ဍများကိုဖတ်ရှုပါများအတွက်) မခံမယူခဲ့ပါဘူးသောကြောင့်, ကျနော်တို့အနေနဲ့ MRI သူ 81 မြီးကောင်ပေါက်များ၏အဖွဲ့ခွဲဘို့ငါတို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထပ်ခါတလဲလဲနှင့်သိမြင်မှုရလဒ်များကို၏ညှနျကွားနှင့်အရေးပါမှုကိုမပြောင်းလဲရှိနေဆဲ (Data ) မပြပါ။
(ကုဗစင်တီမီတာ၌) တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ပေမဲ့မရစာရင်းအင်းအရေးပါမှုတစ်ခုအဆင့်မှာ, အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြား (265.3 ± 29.5 vs. 269.6 ± 26.7, သေးငယ် trended; 0.00369 ± 0.018312 vs. -0.00609 ± 0.014076 residualized, p = 0.139, ဃ = 0.35) ။ ဤအ volumes ကိုအကြားအကြွင်းမဲ့အာဏာကွဲပြားခြားနားမှုငယ်ပေမယ့်, ထိုစမ်းသပ်မှုသည်ဤဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုထင်ဟပ်သည့် ICV နှင့်အရေးပါမှုကိုတန်ဖိုးများများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားမှ residualizing ပြီးနောက်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်သတိပြုပါ။ ထို့အပွငျတိုကျရိုကျနှင့်ဦးနှောက် volumes ကိုအပေါ်အသက်အရွယ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော် re-သို့ပွေးလေ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအသက်အရွယ်အဘို့အ Co-ကွဲပြား။ ကျနော်တို့ orbitofrontal cortex အတွက်အဝလွန်လူငယ်များအတွက်သိသိသာသာနိမ့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုတွေ့ရှိခဲ့ (32.3 ± 3.68 vs. 33.3 ± 3.99; ± 0.00781 vs. -0.024944 ± 0.01227, p = 0.018947, ဃ = 0.005 0.66 residualized) ။ အဆိုပါ OFC အသံအတိုးအကျယ်အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုနှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားသို့မဟုတ် HOMA-မှာ IR အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မပြောင်းလဲခဲ့သညျ။ prefrontal cortex နဲ့ anterior cingulate cortex အပါအဝင်အကဲဖြတ်သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ, အဝလွန်နှင့်ပိန်ကြုံသောသင်တန်းသားများကိုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားကြဘူး။ အသက်အရွယ်အဘို့အ co-ကွဲပြားသောဤဆက်ဆံရေးမဆိုမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည် TFEQ နှင့်သိမြင်မှု၊ BMI နှင့် MRI ပမာဏအတိုင်းအတာများအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထူးသ, TFEQ အပေါ်ပိုးသတ်ဆေးအချက်ရမှတ် BMI (r (81) = 0.406, p <0.001), Stroop အရောင် - စကားလုံးရမှတ် (r (77) = -0.272, p = 0.017) နှင့် OFC မီးခိုးရောင်နှင့်အတူသိသိသာသာဆက်စပ်မှုပြသ ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် (r (71) = -0.273, p = 0.021) ။ OFC ပမာဏနှင့်ပိုးမွှားများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အတွက်သီးခြားစီလေ့လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဝလွန်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အပိုးသတ်ဆေးနှင့် OFC အသံအကြားဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ (r (40) = -0.028, p = 0.864), ပိန်ကြုံသောအုပ်စုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့သည် (r (31) = -0.460, p = 0.009) ။ BMI နှင့် Stroop အကြားဆက်နွယ်မှုမှာ MRI ရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် (အချက်အလက်များကိုမပြပါ) ။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါ TFEQ အပေါ် disinhibition, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားသိမြင်မှုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်အပြန်အလှန်ပေါ်လာမယ်လို့သော်လည်း disinhibited စားခြင်းနှင့်သိမြင်မှုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းအချို့အခြေအနေများတွင်အစားအသောက်ကန့်သတ်ထားပေမယ့်ကလုံးဝကိုအခြားသူများအတွက် overeat လေ့ရသောထဲမှာ "တင်းကျပ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း" ၏ဖော်ပြထားမော်ဒယ်ညီ (20).
အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ္ထု neurostructural ရလဒ်များကို (အရွယ်ရောက်သူစာပေအတွက်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ8, 9) မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချဆန္ဒပြနေသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုနမူနာတွင်ဤလျှောက်လျော့နည်းအများစုသည် orbitofrontal cortex, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အရေးကြီးသောဦးနှောက်ဒေသများအတွက်မှတ်သား, ဒါပေမယ့်လည်းမြေတပြင်လုံးတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဘို့အားနည်းလမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားကအခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်တည်ရှိနေသောပိုပြီးသိမ်မွေ့အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချအမှန်တကယ်တစ်ခုတိုးချဲ့နမူနာအတွက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိစေခြင်းငှါသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရေးကြီးတာကဒီအစီရင်ခံစာအတွက်ကျနော်တို့ TFEQ အပေါ်ပိုမိုမြင့်မား disinhibition ရမှတ်အများရှိသော်လည်း, အိုင်ကျူအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပင်လျှင်, အမူအကျင့်တားစီးဖို့အလယ်ပိုင်းဖြစ်ထင်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာထင်ဟပ်သိမြင်စမ်းသပ်မှုအပေါ်အနိမ့်စွမ်းဆောင်မှုသာမှပိုလျှံအလေးချိန်နှင့်အတူအုပ်စုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းတာသည့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဒေသများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများထဲကကျနော်တို့ TFEQ နှင့် OFC, အမူအကျင့်တားစီး (ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်) အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောသောဦးနှောက်ဒေသ၏ disinhibition အချက်အကြားဆက်ဆံရေး ascertaining အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်အထူးသအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ကြောင်း (သူတို့အကြောင်းကိုထိပုတ်ပါအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပါအဝင်) ကြှနျုပျတို့၏တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတာဝန်များကို၏တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ Stroop ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအလိုအလျှောက်တုံ့ပြန်မှု၏တားစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အမူအကျင့် (ထို TFEQ ၏ disinhibition အချက်) နှင့်ဦးနှောက်ဒေသ (OFC) ၏တိုက်ရိုက်သိမြင်မှုအပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက် TFEQ ၏ disinhibition အချက်ဖို့ (တုံ့ပွနျမှုတားစီးတိုင်းတာကြဘူးသောအခြားတိုကျရိုကျတာဝန်များကို vs. Stroop) အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒ (OFC) ကြှနျုပျတို့၏တွေ့ရှိချက်များ၏တိကျသောနှင့်၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့သိရှိနိုင်ရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ငါတို့သည်လည်း disinhibition အချက်ရမှတ်များနှင့် BMI နှင့် OFC အသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဦးစလုံးအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ disinhibition နှင့် OFC အသံအတိုးအကျယ်အကြားဆက်ဆံရေးပိန်ကြုံခြင်းနှင့်အဝလွန်သင်တန်းသားများအတွက်သီးခြားစီလေ့လာခဲ့ပါတယ်အခါ, သာပိန်ကြုံသောအုပ်စုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီပြီးသား (BMI နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကျနော်တို့သရုပ်ပြအဖြစ်) ကို disinhibition- ၏အရေးပါသောအဆင့်ကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်, အပိုဆောင်း disinhibition အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာ OFC အတွက်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများကိုတွင်ထင်ဟပ်မရပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများသို့မဟုတ်ကွန်ရက်မှာအကဲဖြတ်သည်မဟုတ်မထွက်ရ ဤလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။ နှစ်ခုအလေးချိန်အုပ်စုများ၏အသီးအသီးအဘို့ဤမတူညီသောတွေ့ရှိချက်အဘို့နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေပေးသောအဝလွန်အုပ်စုများကို item ထောက်ခံချက်များပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီရှိကြောင်း, သူတို့ကလူမှုရေးလိုလား၏ပြဿနာများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ထို့ကြောင့်သူတို့အပြည့်အဝ၏အတိုင်းအတာအစီရင်ခံရန်လျော့နည်းဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် ဤအုပ်စုထဲတွင်အသင်းအဖွဲ့ dampening စားမှာသူတို့ရဲ့အမူအကျင့် disinhibition ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့ငါတို့သည်နှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကိုဝေသောအခါကှဲလှဲလျော့နည်းသွားအခါအကွာအဝေးကန့်သတ်, Correlate ၏အမည်ရအဆိုပါဖြစ်ရပ်လျော့ကျလာကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုနို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူအတွက် disinhibition အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လျှော့ချခြင်းနှင့်တိုကျရိုကျမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းများ၏ Cross-Section သဘောသဘာဝကျွန်တော်တို့ကို directionality သို့မဟုတ် causation များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ခွင့်ပြုမထားဘူး။ သူကပြောပါတယ်ခံနှင့်အတူဤအသင်းအဖွဲ့များ၏ညှနျကွားနှင့် ပတ်သက်. တော်တော်များများယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်သီအိုရီရှိပါတယ်။
တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေမူလတန်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်လိုငွေပြမှု disinhibited စား neurocognitive function ကိုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဆင်ခြင်ခြင်း၏ဤလိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (တိုးလာအတွက်ကယ်လိုရီစားသုံးမှု presage မှအပြုအမူအစာစားခြင်းအတွက် disinhibtion ဖေါ်ပြခြင်းအလုပ်ကထောက်ခံနေသည်21) နှင့်အဝလွန်ခြင်း (22) ။ ဒါဟာ (စအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အလုပ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမြင်စားသုံးမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏အားနည်း activation ကိုပြသတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, အနာဂတ်ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်23); ဖြစ်ကောင်းသူတို့အတူတူပင်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုရယူထားခြင်းမှပိုကြီးတဲ့လှုံ့ဆော်မှု (အသေးစိတ်အစားအစာ) လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်းမှဒီလေ့လာမှုရလဒ်အတွက်သရုပ်ပြသူတို့အားကဲ့သို့ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံလိုငွေပြမှုသည်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေ (ဆက်နွယ်နေကြောင်းအလယ်အသက်အရွယ်အတွက်စတင်တိုးမြှင့်နေသည်ဟု BMI ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦး 24 နှစ် longitudinal လေ့လာမှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားကထောက်ခံနေသည်24) ။ ဒါ့အပြင်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအမိန့်ထောက်ခံအားပေး (hippocampal volumes ကိုဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်အတွက်ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကျွန်တော်ရှာတွေ့ဘယ်မှာလူကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်25) အဖြစ်ကျနော်တို့ microstructural သမာဓိရှိတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး volumes ကိုနှင့်အဖြူရောင်အမှု၌သိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်လျှော့ချကိုရှာဖွေဘယ်မှာ T2DM အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် (26) ။ ကျနော်တို့ပိုလျှံအလေးချိန်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကပြသသည့်အဝလွန်ခြင်း-ဆက်စပ်အင်ဆူလင်ကိုခုခံလျော့နည်းသွားအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ positive ။ ကျနော်တို့ (ဤသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှမော်ဒယ်ဖော်ပြထားပါပြီ27) အရာအတွက်ကျွန်တော်အင်ဆူလင်ကိုခုခံကမောက်ကမဖြစ်မှု endothelial နှင့်ဆက်စပ်သောလျော့နည်းသွားဦးနှောက်သွေးကြော reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်း hypothesize ။ ကျနော်တို့ကသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ကဲ့သို့သောဦးနှောက်ကို Activation, စဉ်အတွင်းပါဝင်ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ Synaptic လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာရှိကြောင်းကိုငါသိ၏။ ပုံမှန်ဦးနှောက်၌ဤ (အတိုးမြှင့သိမြင်ဝယ်လိုအားကိုထောကျပံ့ဖို့, အရှင်ကြောင်းဒေသမှဂလူးကို့စရရှိမှုအတွက်တိုးဒေသဆိုင်ရာ vasodilation အတွက်ရလဒ်များနှင့်28) ။ ထို့ကြောင့်, ကောင်းစွာ-စညျးမဉျြးစညျးကမျးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုဖို့အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်သည့်သွေးကြော reactivity ကို,, (ဦးနှောက်အသက်သွင်းနေစဉ်တစ်အကောင်းဆုံးအာရုံခံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါသည်29) ။ ပင်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှေ့တော်၌အဝလွန်ကလေးငယ်များအတွက် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖေါ်ပြခြင်းသုတေသန (30), နောက်ထပ်ဒီဝုဏ်ထောက်ခံပါတယ်။ ထို့အပြင်ရောင်ရမ်းအမှတ်အသားကို C-reactive protein (CRP) ကြှနျုပျတို့၏အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ကြီးမားသောအလိုက်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများခုနှစ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေး (ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားသိမြင်မှုကျဆင်းလာ၏ putative ပြုပြီအဖြစ်ရောင်ရမ်း cytokines ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်တွေ့ကြပြီ31-34) ။ ဤအသိမြင်သက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားပိုလျှံရောင်ရမ်း cytokines ရေရှည်အလားအလာ (LTP), အ hippocampus အတွက်မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလျော့ကျနိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြတိရိစ္ဆာန်ဒေတာများကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ inflammatory cytokines လည်းအမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦးအာရုံကြောသမာဓိရှိ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့အရေးကြီးတယ် process လုပ်တယ်, neurogenesis နှင့် neuroplasticity အတွက်ချွတ်ယွင်းစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကတတိယဖြစ်နိုင်ခြေအမူအကျင့် disinhibition အနုတ်လက္ခဏာဟူမူကားကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်သံသရာဖြစ်စေတဲ့, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှု၏တားစီးတာဝန်ရှိသည်ဦးနှောက်ဒေသများ impact ရသော, အဝလွန်ခြင်းမှ predisposes သိရပါအံ့, ဤသက်ရောက်မှု bidirectional ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတတိယဖြစ်နိုင်ခြေကရရှိခဲ့ထားပြီးတခါဒါခက်ခဲတစ်ဦးချင်းစီအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အတှကျအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြကူညီနိုင်ဘူး။
ကျနော်တို့အကဲဖြတ်သောအနည်းငယ်ဦးနှောက်ဒေသများအကြား, အ OFC, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အမူအကျင့်တားစီးအတွက်အရေးကြီးသောအဖြစ်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးတစ်ဦးနှောက်ဒေသ, အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအထင်ရှားဆုံးအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချရေးခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်တိုက်တွန်းပါသည်။ အလေးချိန်အမြတ်အတွက်၎င်း၏ဖွယ်ရှိအရေးပါမှုမှအမူအကျင့် disinhibition အမှတ်ဆက်စပ်ဒီဧရိယာထဲမှာအသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချနှင့်အတူ coupled နဂိုအတိုင်း OFC လိုအပ်မှထင်သိမြင်စမ်းသပ်မှုအပေါ်အနိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်။
ဤလေ့လာမှုတွင်ရှင်းလင်းသောအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ပထမအချက်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်မပေးသောကဏ္crossစုံအမြင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အတော်အတန်ကျိုးနွံသောနမူနာအရွယ်အစားအရယခင်လေ့လာမှုများတွင်အဝလွန်ခြင်း (သို့) ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုတွေ့ရှိရသော ဦး နှောက်ဒေသများသို့ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းတာခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့မခန့်မှန်းနိုင်သည့်အခြား ဦး နှောက်ကဏ္areasများလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းတွင်လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု၏တတိယအကန့်အသတ်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါဝင်သူများ၏လက်ရှိအလေးချိန်သာရှိပြီးအဝလွန်ခြင်း၏ကြာရှည်မှုကိုမှတ်ချက်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လေ့လာသောနမူနာအဝလွန်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်အင်ဆူလင်ခုခံ၏ကြာချိန်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုအုပ်စုများအကြားဂရုတစိုက်ကိုက်ညီမှု, ကောက်ယူ multidimensional အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် MRI အချက်အလက်များ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောဘက်မလိုက် MRI နည်းလမ်းများအပါအဝင်သိသိသာသာအားသာချက်များရှိပါတယ်။
ပိုကောင်းဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုနားလည်စေရန်, အနာဂတ်အလုပ် concomitantly သိမြင်မှု, အမူအကျင့်များနှင့် neurostructural အပြောင်းအလဲများကိုတိုင်းတာခြင်းနေစဉ်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးအဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုခြေရာခံ, longitudinal ဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုလည်းအောင်မြင်သောအဝလွန်ခြင်းကုသမှု (ဥပမာ bariatric ခွဲစိတ်) ၏အကျိုးဆက်များကိုဆနျးစစျဖို့ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှတဆင့်တိုးတက်နိုင်နှင့်အရှင်သည်ဤလိုငွေပြမှုအချို့ Reversible လုပ်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်အလုပ်ထိုကဲ့သို့သောပြေးနဲ့ anti-inflammatory cytokines ကဲ့သို့သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေဆက်စပ်နေသောအချက်များအကဲဖြတ်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ် (DTI) အဖြစ်ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ MRI နည်းစနစ်အသုံးချသင့်ပါတယ်။
body mass index နှင့် Disinhibition အကြားအစည်းအရုံး
OFC gray matter Volume ကိုနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Disinhibition (ပိန်ကြုံခြင်းနှင့်အဝလွန်) တို့အကြားအစည်းအရုံး
အဆိုပါလေ့လာမှုသုတေသနအရင်းအမြစ်များများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ grant21UL070985RR1 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံကျန်းမာရေး R083537 DK1 နှင့် RO1 DK029893 အမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေနှင့်အကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာစုဆောင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုပါအချက်အလက်များ၏နှင့်ဤစာမူကို၏ပြင်ဆင်မှုအတွက် Allison Larr ၏အကူအညီအတွက်ဖိုးလိုင် Yau နှင့် Valentin Polyakov သကဲ့သို့ကောင်းစွာဒီသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့သူကလေးများနှင့်မိသားစုများကိုအသိအမှတျပွုဖို့အလိုရှိ၏။
အခြားစာရေးဆရာများအဘယ်သူအားမျှထုတ်ဖော်ရန်ဆိုဘဏ္ဍာရေး / ပဋိပက္ခဖြစ်အကျိုးစီးပွားများ
1 ။ အော့ဒန်ဝင်း CL, ကာရိုး MD, Flegal KM ။ အမေရိကန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအသက်အရွယ်အဘို့အမြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, 2003-2006 ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2008; 299: 2401-5 [။PubMed]
2 ။ Stunkard AJ, Messick အက်စ်သုံး-Factor အစားအသောက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, disinhibition နှင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုတိုင်းတာရန်မေးခွန်းလွှာအစာစားခြင်း။ J ကို Psychosom Res ။ 1985; 29: 71-83 [။PubMed]
3 ။ Schwartz မဂ္ဂါဝပ်, ဝုဒ် SC, port: D, Jr. Seeley RJ, Baskin DG ။ အစားအစာစားသုံးမှု၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထိန်းချုပ်မှု။ သဘာဝ။ 2000; 404: 661-71 [။PubMed]
4. Korner J ကို, Leibel RL ။ စားရန်သို့မဟုတ်မစားရန် - အူသည် ဦး နှောက်ကိုမည်သို့ပြောဆိုသည်။ N Engl J ကို Med ။ 2003; 349: 926-8 ။PubMed]
5 ။ မာတင် LE, Holsen LM, ကုန်သည်များ RJ, et al ။ အဝလွန်ကျန်းမာအလေးချိန်လူကြီးများအတွက်အစားအစာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောယန္တရားများ။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2010; 18 ။ 254-60 [PubMed]
6 ။ et al del Parigi တစ်ဦးက, Gautier JF, ချန် K သည်။ Neuroimaging နှင့်အဝလွန်ခြင်း: positron ထုတ်လွှတ် tomography သုံးပြီးလူသားတွေအတွက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် satiation ဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုပုံဖော်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2002; 967: 389-97 [။PubMed]
7 ။ Damasio H ကို, Grabowski T က, ဖရန့် R ကို, Galaburda လေး, Damasio AR ။ Phineas Gage ၏ပြန်လာ: တစ်ကျော်ကြားလူနာများ၏ဦးခေါင်းခွံကနေဦးနှောက်အကြောင်းကိုသဲလွန်စ။ သိပ္ပံ။ 1994; 264: 1102-5 [။PubMed]
8 ။ Walther K ကို Birdsill AC အ, Glisky EL, ရိုင်ယန်အယ်လ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အထက်အမျိုးသမီးများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2010; 31: 1052-64 [။PubMed]
9 ။ Taki Y ကို, Kinomura S က, Sato K သည်, et al ။ 1,428 ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းများနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2008; 16 ။ 119-24 [PubMed]
10 ။ Pannacciulli N ကို, Del Parigi တစ်ဦးက, ချန် K ကိုက Le DS, Reiman EM, Tataranni PA ဆိုပြီး။ လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဦးနှောက်မူမမှန်: တစ် voxel-based morphometric လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2006; 31: 1419-25 [။PubMed]
11 ။ Volkow ND, et al ဝမ် GJ, Telang က F ။ ကျန်းမာတဲ့လူကြီးတွေမှာ BMI နှင့် prefrontal ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့။ အဝလွန်ခြင်း (Silver, နွေဦး) 2009; 17: 60-5 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး][PubMed]
12. Elias MF၊ Elias PK၊ Sullivan LM, Wolf PA, D'Agostino RB အဝလွန်ခြင်းနှင့်သွေးတိုးရောဂါ၏ရှေ့မှောက်၌နိမ့်သိမြင်မှု function ကို: အ Framingham နှလုံးလေ့လာမှု။ Int J Obes Relat Metab Disord ။ 2003; 27: 260-8 ။PubMed]
13 ။ Gunstad J ကိုပေါလုသည် RH အ, Cohen ကို RA, တိတ် DF, Spitznagel ကို MB, ဂေါ်ဒွန်အီးဓာတ်လှေကားခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းမဟုတ်ရင်ကျန်းမာလူကြီးများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 48: 57-61 [။PubMed]
14 ။ Waldstein SR, Katzel LI ။ သိမြင်မှု function ကိုမှစုစုပေါင်းအဝလွန်ခြင်းနှင့်သွေးဖိအားနှိုင်းယှဉ်အလယ်ပိုင်း၏ interactive ဆက်ဆံရေး။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း (Lond) 2006; 30: 201-7 [။PubMed]
15 ။ Lokken KL, Boeka AG က, Austin HM, Gunstad J ကို, သဟဇာတ CM ။ အလွန်အဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုအထောက်အထား: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ တစ်ဟုန်ထိုးအဝလွန်ခြင်း Related dis ။ 2009; 5: 547-52 [။PubMed]
16 ။ Lezak MD, Howleson DB, Loring DW, Hannay HJ, Fischer JS ။ Neuropsychological အကဲဖြတ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2004 ။
17 ။ ကောင်းသော CD ကို, Scahill RI က, Fox က NC, et al ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာခန္ဓာဗေဒပုံစံများအလိုအလျောက်ကွဲပြားခြားနားမှု: ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာစိတ်ဖောက်ပြန်၏လေ့လာမှုများနှင့်အတူအတည်ပြု။ Neuroimage ။ 2002; 17: 29-46 [။PubMed]
18 ။ et al Tzourio-Mazoyer N ကို, Landeau B, Papathanassiou: D ။ အဆိုပါ MNI MRI Single-ဘာသာရပ်သည်ဦးနှောက်တစ် macroscopic ခန္ဓာဗေဒကှကျကို အသုံးပြု. SPM အတွက် Active ၏အလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2002; 15: 273-89 [။PubMed]
19 ။ Convit တစ်ဦးက, Wolf ကညီလေး, က de လီယွန် MJ, et al ။ အိုမင်းခြင်းနှင့် schizophrenia အတွက်တွေ့ရှိချက်: pre-တိုကျရိုကျဒေသများထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2001; 107: 61-73 [။PubMed]
20 ။ Westenhoefer J ကို, Broeckmann P ကို, Munch AK, အပြုအမူနှင့် disinhibition အကျိုးသက်ရောက်မှုစားသုံးခြင်း၏ Pudel V. သိမှုထိန်းချုပ်ရေး။ အစာစားချင်စိတ်။ 1994; 23: 27-41 [။PubMed]
21 ။ Yeoman MR, Leitch M က, Mobini အက်စ် Impulse သုံးယောက် Factor စားမေးခွန်းလွှာထံမှ disinhibition သော်လည်းမထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2008; 50: 469-76 [။PubMed]
22 ။ Hays NP, Bathalon မိသားစုဆရာဝန်, McCrory MA, Roubenoff R ကို, Lipman ကို R ကို, Roberts သည် SB ။ အပြုအမူအစာစားခြင်းကျန်းမာတဲ့အမျိုးသမီးအရွယ်ရောက်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းအသက် 55-65 က y ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ နံနက် J ကို Clin Nutr ။ 2002; 75: 476-83 [။PubMed]
23 ။ Stice အီး, Yokum S က, Bohon ကို C, Marti N ကို, Smolen အေဆုကြေး circuitry Response အစားအစာမှခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအတွက်အနာဂတ်တိုးဟောကိန်းထုတ်: DRD2 နှင့် DRD4 ၏စိစစ်ဆိုးကျိုးများ။ Neuroimage ။ 2010; 50: 1618-25 [။PubMed]
24 ။ Gustafson: D, Lissner L ကို, Bengtsson ကို C, Bjorkelund ကို C, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းများနှင့်ဦးနှောက်ကျုံ့၏ Skoog ဗြဲတစ်ဦးက 24 နှစ်နောက်ဆက်တွဲ။ အာရုံကြော။ 2004; 63: 1876-81 [။PubMed]
25 ။ Convit တစ်ဦးက, Wolf က OT တာရှုကို C, က de လီယွန် MJ ။ လျှော့ချဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်ဆင်းရဲသောသူသည်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပုံမှန်သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြား hippocampal ကျုံ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2003; 100: 2019-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး][PubMed]
26 ။ Yau PL, ဗီယာ, DC, ရိုင်ယန် CM, et al ။ အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအဝလွန်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဦးနှောက်ရောဂါများများအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား။ Diabetologia ။ 2010
27 ။ တစ်ဦးရှင်းလင်းမော်ဒယ်: အင်ဆူလင်ကိုခုခံအတွက်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းအကြား Convit အေ Links များ။ Neurobiol အို။ 2005; 26 (ပျော့ပျောင်း 1): 31-5 [။PubMed]
28 ။ Benton: D, က Parker py, Donohoe RT ကို။ ဦးနှောက်နှင့်မှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှဂလူးကို့စများ၏ထောက်ပံ့ရေး။ J ကို Biosoc သိပ္ပံ။ 1996; 28: 463-79 [။PubMed]
29 ။ Drake မှန် CT, Iadecola C. နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်အတွက်အာရုံခံအချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက် Lang ။ 2007; 102: 141-52 [။PubMed]
30 ။ Karpoff L ကို, Vinet တစ်ဦးက, Schuster ငါ et al ။ အဝလွန်ယောက်ျားလေးများအတွက်ကြွင်းသောအရာများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးကြော reactivity ကို။ EUR J ကို Clin Invest ။ 2009; 39: 94-102 [။PubMed]
31 ။ Dik MG, Jonker က C, Comijs HC, et al ။ အဟောင်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သိမှတ်ခံစားမှုမှဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါအစိတ်အပိုင်းများအလှူငွေ။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2007; 30: 2655-60 [။PubMed]
32 ။ ရောဘတ် ro, Geda သင်တို့က, Knopman DS, et al ။ ဇီဝဖြစ်စဉ် Syndrome, ရောင်ရမ်းခြင်း, အသက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Nonamnestic အပျော့စားသိမှုချို့ယွင်း: တစ်ဦးကပြည်သူ့အင်အား-based လေ့လာပါ။ အယ်လ်ဇိုင်းမား dis Assoc disorders ။ 2009
33 ။ et al V ကို, Starr V ကို, Bruehl H ကို, ချွေး။ C-reactive protein အဝလွန်နှင့်အဝလွန်အမျိုးသမီးများသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ဆက်စပ်နေသည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း။ 2008; 31: 198-207 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး][PubMed]
34 ။ Yaffe K ကို Kanaya တစ်ဦးက, Lindquist K သည်, et al ။ အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကျဆင်းလာ၏အန္တရာယ်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2004; 292: 2237-42 [။PubMed]